कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? (विवरणसहित) « Drishti News – Nepalese News Portal
कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ हजार ७२७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ५ हजार ७५७ र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ७० जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् ।
जिल्लागत विवरण अनुसार प्रदेश १ को इलाममा ४, उदयपुरमा ३, ओखलढुंगामा ६, खोटाङमा ४, झापामा ७७, ताप्लेजुङमा १, तेह्रथुममा १, धनकुटामा १, पाँचथर १, भोजपुरमा ६, मोरङमा १६१, संखुवासभामा १ र सुनसरी ५८ जनामा कोरोना भेटिएको छ।
बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा मात्र २४ सय ४ जनामा कोरोना भेटिएको छ। काभ्रेमा ६९, चितवनमा १ सय ११, दोलखामा ११, धादिङमा १३, नुवाकोटमा १३, भक्तपुरमा १३३, मकवानपुरमा ३८, रामेछापमा १४, ललितपुरमा ४१९, सिन्धुपाल्चोकमा २८ र सिन्धुली ६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
कोरोना पुष्टि हुनेमा लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा २८, कपिलवस्तुमा २७, गुल्मीमा १४, दाङमा २५२, नवलपरासीमा ४६, पाल्पामा ४३, प्यूठानमा १०, बर्दियाका ५०, बाँकेमा ४ सय २२, रुकुम पूर्व २, रुपन्देहीमा ४७३ र रोल्पामा ४४ जना छन्।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा १४, कञ्चनपुरमा ४६, कैलालीमा ४१, डडेल्धुरामा १३, डोटी २, दार्चुला २, बाजुरामा ३ र बैतडीमा १६ जनामा कोरोना भेटिएको छ ।
बाँकेमा थप ११ संक्रमितको मृत्यु
बाँके । बाँकेका बिभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका थप ११ सङ्क्रमितको गए राति मृत्यु भएको छ